Duufaanada Siyaasadeed Ee Ku Xeeran Dalka. - Boga Wise Man
Somaliland waxay maraysaa marxalad u baahan ka baarandegid iyo in la dejiyo istaraatijiyad cusub oo wadanka loo badbaadiyo.
Maanta khatarta ugu badani Somaliland waxay kaga imanaysaa dalka dibadiisa. Waxaynu jaar lanahay Somalia oo loo qaybiyey shan gobol iyo dawlad dhexe. Oo inagoo arkaynaa shanti gobol ragii hogaaminayay ay wadamo ay ka mid yihiin Imaaraad, Turkey, Maraykan, Ingiriis iyo EU’du kala kaxaysteen oo kala hayaan. Waxaa hada toos u socda tartanka ololaha doorashada Somalia oo siyaasiyiintii ugu tunka weynaa Somalia sida Kheyre, Deni iyo Axmed Madoobeba ay ka ololaynayaan Nairobi. Is dhiibitaanka ku dhacay madaxdii Somalia waxay marag u tahay inaan Somalia hanaqaadayn dhawaan illaa uu Alle faraj khayr qaba u furo mooyee.
Dhanka kale Somaliland waxa saamaynaya khalkhalka siyaasadeed ee ka socda Ethiopia. Soomaalidii Ethiopia oo iyadu aan wax diyaar garaw ah ka samayn mawjada Oromada ah ee kusoo began ee wada dhulbalaadhsiga. Xataa jabhadihii hubaysnaa sida ONLF maanta waxay hoostagaan taliska Ethiopia. Ku darsoo Raysal Wasaaraha wadanka Ethiopia-na waynu ogaanay halka uu ka taagan yahay taageerada uu Somaliland u hayo oo waa kii lahaa Farmaajo ayaa Hargeysa ii soo raacaya.
Dhinaca kale wadamada Reer Galbeedka ayaa ah qaar iyagu farogelin toos ah ku haya siyaasada Somaliland. Waxaynu markasta aragnaa wakiilka EU-da u qaabilsan Somalia oo inagu khasbaya afkaarta uu sido dhaqan xumada ah iyo in dumarka kooto loo xidho. Waxa kale oo nasiib darro ah in Beesha Caalamku ay dhexdhexaadiyaan siyaasiyiinteena oo iyagoo hawlahooda inaga dhex wata hadana aynu u aragno qaar dan inoo ah.
Iyadoo ay halkaas marayso ayaa hadana warka iyo arrinka bulshadu ka sheekaysanaysaa uu markasta ku saabsan yahay loolanka siyaasadeed ee ka dhex socda Xisbiga Kulmiye.
Previous Post Hodan – Qaybtii 4aad
Next Post Xaas Raadiye Program